Ceelasha Oo Dagaal Ka Dhacay | Gedoonline
Ceelasha Oo Dagaal Ka Dhacay	Added by Editor on August 10, 2012.Saved under Latest News	MUQDISHO(GMN)-Dad goobjoogayaal ah oo ku sugan deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Magaaladda Muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi uu dagaal ka dhacay.
Dagaalka ayaa waxa uu ka danbeyey markii kooxo hubeysan ay weerar ku qaadeen goob ciidamadda Dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin Deegaanka Ceelasha Biyaha.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in dagaalka uu socday mudo kooban isla markaana kooxihii soo qaaday weerarka durbadiiba halkaasi ay isaga tageen.
Ma jiraan wax war ah oo labada dhinaca ay ka soo saareen dagaalkaasi ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Muqdisho.
Biyo la’aan ka taagaan Ceelasha
Shabaab oo dad ku dilay ceelasha
Dowladda oo hawlgallo ammaan sugis ah ka fulisay Ceelasha
Diyaarado caawa lagu arkayo ceelasha biyaha
Meydad lagu sheegay AMISOM oo lagu jiijiidayo Ceelasha